RASMI: Ku guuleystihii Koobka Adduunka ee David Villa oo ku dhawaaqay ka fariisashadiisa Ciyaaraha – Gool FM
Haaruun November 13, 2019
(Tokyo) 13 Nof 2019. Ku guuleystihii koobka Adduunka la qaaday xulka Spain ee David Villa ayaa ku dhawaaqay ka fariisashadiisa ciyaaraha kaddib shir jaraa’id oo uu qabtay.
37-sano jirkaan kaasoo hadda u ciyaaraya sanadkan kooxda reer Japan ee Vissel Kobe isla markaana ay saddex kulan horyaalka kaga harsan tahay ka hor inta aan la ciyaarin afar dhammaadka Emperor’s Cup dabayaaqada bisha December.
Halyeyga reer Spain ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Kaddib 19-sanadood oo xirfadlenimo waxaan go’aansaday inaan ciyaaraha kubadda cagta isaga fariisto dhammaadka xilli ciyaareedkan, mahadsanidiin dhammaad kooxdeyda, macallimiintayda iyo xiddigaha aan isku kooxda nahay kuwaasoo ii ogolaaday inaan ku raaxayso xirfadeydan riyada ah, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa qoyskeyga, kuwaasoo had iyo jeer i taageerayay.”
Villa ayaa 19-sanadood ku soo guda jiray ciyaarihiisa waxaana uu ka soo bilaabay kooxda reer Spain ee Sporting Gijon ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin Zaragoza oo uusan sidoo kale u soo ciyaarin kooxaha Valencia, Barcelona iyo Atletico Madrid.
Kaddib markii uu inta ugu badan xirfaddiisa ciyaareed oo ku soo qaatay dalkiisa hooyo ee Spain Villa ayaa u dhaqaaqay sanadkii 2015-kii New York City, halkaasoo uu ku qaatay afar xilli ciyaareedka hor inta uusan ku biirin Kobe horraantii sanadkan.
Weeraryahankan ayaa dhaliyey 12 gool waxaana uu caawiyey labo gool oo kale 26 kulan oo uu u saftay kooxda kaalinta 10-aad kaga jirta horyaalka J-League.
Intii uu ciyaarayay xirfaddiisa kooxaha, Villa waxa uu qaaday saddex horyaal oo La Liga ah, saddex Copa del Rey, waxaana uu kula guuleystay Champions League Kooxda Barcelona sanadkii 2011-kii.
Heerkiisa qarankana waxa uu xulkiisa Spain u saftay 98 kulan isagoo kula guuleystay Euro 2008 ka hor inta uusan la qaaday Koobka Adduunka labo sano kaddib.